. အချို့သောအမျိုးသားများသည် rebooting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သန္ဓေတည်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သည်အောင်မြင်စွာ reboot လုပ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤကောက်ကျစ်သောယုတ္တိဗေဒကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူများသုံးစွဲသူများအတွက်အသုံးမကျသည့်အလေ့အကျင့်ကိုထောက်ခံရန်သူတို့ကို ဦး ဆောင်သည် edging ။ ဤသည်ကိုထပ်တက် revving ထို့နောက်ထို့နောက်အမှုအရာကိုဆင်းအအေးရပ်တန့်, အော်ဂဇင်ရဲ့အစွန်းမှတက် masturbating ဖြစ်ပါတယ်။ edging သုံးခုဘုံဗားရှင်း:
masturbating မပါဘဲ porn အကဲခတ်
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနှင့် ejaculating မပါဘဲ Masturbating
reboot ကို porn သို့မဟုတ် porn အစားထိုးများ ဟူ၍ သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် 1 &2သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားသူများအတွက်၊ porn ကြည့်ရှု (သို့မဟုတ် porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျ) အနေဖြင့် edging ရိုးရှင်းစွာတစ်အော်ဂဇင်ရှိခြင်းနှင့်အတူကကျော်လာပြီထက်ပိုဆိုးသည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? ဒါဟာအားလုံး dopamine ဆင်းလာပါတယ်။
စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်လိင် (Pavlovian) အေးစက်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေကြတယ်:
(ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါး,) ကသဘာဝနည်းလမ်းကတဆင့်မှီအဆင့်ဆင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသော Dopamine အဆင့်ဆင့်
ကြာရှည်စွာများအတွက်ခြီးမွှောကျကျန်ကြွင်းသောအလယ်အလတ် dopamine အဆင့်ဆင့်
1 &2၏ Combo
သငျသညျ edging နေတယ်ဆိုရင် ညစ်ညမ်းစေရန် သငျသညျစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ဝတ္ထုပုံရိပ်ယောင် 1 အံ့သြစရာသို့မဟုတ်တုန်လှုပ်ဖွယ်အမျိုးအစားများရှာဖွေတာ) porn2အဘို့ကျော့ကွင်းကိုရှာဖွေနေ)) အဆိုပါ dopamine3၏စွမ်းရည်မြှင်နှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏သဘာဝအမြင့်ဆုံး dopamine အဆင့်ဆင့်ပေါင်းစပ်ပြီးနေကြသည်။ Edging နာရီသို့ခြီးမွှောကျ dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်လျက်, ရန်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ် တောင်းဆို စဉ်ဆက်မပြတ်အမြင်အာရုံဆွ, လျင်မြန်-မီးအသစ်အဆန်း, မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေမြင်ကွင်းမှကလစ်နှိပ်ခြင်း, အထူးသဖြင့် fetishes, သင်၏ကိုယ်လက်များ၏ဖိအားပေးမှု။ ဒါတွေကိုအစစ်အမှန်လိင်တိုက်စစ်ပါတယ်။ (ဒီတွေ့မြင် video - Rebooting: နောကချာ့ချ်ကဘာတွေပြန်ဖြစ်လို့ရသလဲ)
High dopamine ကဆုချီးမြှင့်တဲ့ circuit ကိုပြောတယ်၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်၊ မင်းဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်လုပ်သင့်တယ်” စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုမမေ့ပါနှင့်။ ကြာရှည်စွာ dopamine သည်သင်၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။ သငျသညျမှားအားကစားများအတွက်လေ့ကျင့်နေကြသည်။ ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားဖြစ်လာရန်သင်၏အချိန်ကိုဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
မှားသည့်အားကစားအတွက်လေ့ကျင့်ခြင်းထက်ပိုဆိုးသည်ကား၊ သင်အားလုံးဂိမ်းထဲမှထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ Dopamine ထူးဆန်းသည်။ တစ်ခုခုကမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ထွက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အချိန်မှာတော့ကျသွားတယ်။ သင်၏လိင်မှုကိစ္စကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ dopamine ကို mouse ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည့် voyeur တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ စစ်မှန်သောလိင်သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မကိုက်ညီပါကသင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မကြုံစဖူးငယ်ရွယ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမြင့်တက်စေသည်။ သုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာခြင်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုအကြောင်းကို edging porn မသုံးဘဲ? ငါမှန်းဆသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ YBOP အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, မတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (ဟဲလို nofap / reddit) အကြောင်းကစိတ်ထားပါ။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာတနာတစ်ဦးနှင့်အတူအနီးကပ်အစွန်းမှတည်းခိုဆင်တူလား? မဟုတ်အတိအကျ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်လက်ရန်သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု wiring ကြောင့်။ လိင်ဆက်ဆံသင်သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရန်သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု wiring ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျနှင့်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်ဖို့ rewire ဖို့လိုအပ်နေကြသည်ကြသူဧည့်သည်များအတွက်သိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြင် လိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှု၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများ
လိင်မှုနှိုးဆွခြင်းသည်သဘာဝအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့် dopamine အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရန်အရေးကြီးသည်။ အော်ဂဇင်စ် (edging) ၏ခါနီးတွင် Dopamine သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်မတိုင်မီအချိန်ကယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အော်ဂဇင်တွင်ပလူတိုတင်းသည်မြင့်မားသော dopamine ကိုအခြေခံအဆင့်သို့ကျစေပြီး၎င်းကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သက်သာမှုအချို့ကိုဖော်ပြသည်။
အစဉ်အဆက်စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘဲမတရားသောတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပြည်နယ်အတွက်ဘရိတ် (prolactin) ရလဒ်တွေကိုနှိပ်မရှိပဲ, dopamine ဓာတ်ငွေ့အပေါ်သင်၏ခြေကိုနေရာယူခြင်း။ ယင်းစိတ်မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု edging ဒီအလေ့အကျင့် အစောဆုံးစမ်းသပ်ချက် တိရိစ္ဆာန်များလျှပ်စစ်လှုပ် braving နှင့်ဆန္ဒရှိအိမ်ထောင်ဖက်လျစ်လျူရှု, ထပ်ခါထပ်ခါသူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်မယ်လို့ထားတဲ့အတွက်ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry ပေါ်မှာ။
Over-ဆွအကျိုးကိုဆားကစ်၏စေပါတယ်အဖြစ်အဆုံး၌, (တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့် တွဲဖက်. ) dopamine ၏နာတာရှည်မြင့်မား, အပြည့်အဝလွစွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ခလုတ်များမှာ DeltaFosB, မျိုးဗီဇ၏ activation နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများစုစည်းနေခြင်း။ စွဲများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်အဖြစ်, DeltaFosB အပြုအမူနှင့်ဓာတုစွဲနှစ် ဦး စလုံးစတင်။ သို့သော်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်သည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလိင်ကိစ္စများနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်လိုင်းကိုပြန်လည်တူးဆွပြီး“ လိင်မှု” ကို ပို၍ ပင်ဆွဲဆောင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏လိင်ပတ်ဝန်းကျင်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပါကသင်၏ဆုလာဘ် circuit သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း…။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ရေရှည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် - ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ညစ်ပတ်ခြင်းမရှိခြင်း၊
NoFap“ စူပါပါဝါ” များသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်သာအလုပ်လုပ်သည်
2 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပဲကြည့်ဖို့, ငါ့ပထမဦးဆုံးအမ FAP စိန်ခေါ်မှု ပြု. , ကနေစွမ်းအင်တစ်ခုကြီးမားပေါကျကှဲတယ်။2နှစ်ပေါင်းငါခံစားချက်ပုံတူပွားဖို့ကြိုးစားနေနှင့်အောင်မြင်ခဲ့ဘယ်တော့မှပါပြီ။ ဤအ2နှစ်အတွင်းမှာတော့ကိုယ့်ကိုပြု၏တစ်ဦးချင်းစီ nofap ရုံးတင်စစ်ဆေးမယ့်စွမ်းအင်၏အဆငျ့အောင်မြင်ရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော့်ရဲ့သီအိုရီကဒါဟာသုက်ရည်မှုန်မဟုတ်၊ ဒါနဲ့ nofap ကိုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်တော်တော်လေးမိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးညစ်ပတ်နေတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဆွဲထားတယ်။ ငါ့ရဲ့ T-level ကိုမြှင့်တင်မပါဘဲ၊ ဒီတစ်ခါတော့စွမ်းအင်အတွက်မဟုတ်ဘဲ nofap လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာ PMO လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုနောက်တဖန်ငြီးငွေ့ခဲ့သဖြင့် - စူပါပါဝါများတောင်မှတောင်မှခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရလဒ် - ငါဟာအခုတော့အားပြည့်နေပြီ။ နိဂုံးချုပ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်၊ “ စူပါပါဝါ” များသည်သုက်ရည်သို့မဟုတ်မသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပုံမပေါ်ပါ။ သို့သော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ မရေမတွက်နိုင်သော bikini-babes စာရင်းများ၊ တွယ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးမရှိ၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောအရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ (အခြားချည်မှထပ်မံတင်သွင်းရန်) http://www.youtube.com/watch?v=jX2btaDOBK8
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ သင်သည်“ စူပါပါဝါများ” ဖြစ်လိုသည် - ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အနားသတ်များ၊ ထိမိခြင်းများမရှိ - ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိ Hard-mode ကိုသွားပါ။
နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သူ၏ varicocele နာကျင်မှု edging ကြောင့်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ:
varicoceles ကြောင့်ငါ့ဘောလုံးအမြဲနာနေတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးနှောင့်အယှက်။ ဒါပေမယ့်ငါ nofap စလုပ်တုန်းကတစ်ပတ်အတွင်းမှာပျောက်သွားပြီးငါ့သားအိမ်မှာနာကျင်မှုလုံးဝမရှိဘူး။ “ Yodelout” blog သည် varicocele နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ခဲ့သည်။
အသိအမှတ်မပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ရေကျောက်ရောဂါနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနာကျင်မှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဘောလုံးများတွင်နာကျင်မှုမရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်မည်မျှ ပို၍ ခံစားရသည်ကိုသင်နားလည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အရမ်းကြီးတယ် ရေကျောက်အဖုအပိန့်များပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသော်လည်းယခင်ကကဲ့သို့ရောင်ရမ်းခြင်းမကြီးမားပါ။ ငါစွန်းလိုက်တိုင်းနာကျင်မှုကပြန်လာတယ် ဤသည် edging နှင့် varicocele အလွန်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်၊ NoFap ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူ၏။4လ Journey, 61 နေ့က Streak (စိုစွတ်သောအိပ်မက်၏ချွင်းချက်)
စကားမစပ်, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတူတက်အဆုံးသတ်သူအများအပြား porn မှ edging တစ်သမိုင်းရှိသည်။ အဖြစ် တဦးတည်းကောင်လေး ဆိုသည်ကား,
မကောင်းတဲ့ edging သလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ပိုဆိုးတယ် အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ orgasm ကိုရပြီးအဆုံးသတ်မည့်အစားသင်၏ ဦး နှောက်ကိုဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာရေချိုးရန်လေ့ကျင့်ပေးသည်။ ဒါဟာသင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးပဲ။ အဆိုးဆုံး။ အကယ်၍ သင်သည်စတင်ခဲ့ပြီးသင်၏အချိန်ကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိလျှင်၊ ဘာပဲလုပ်လုပ်အရှိန်အဟုန်မပျက်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် PMO နှင့်မဟုတ်ဘဲ PEO ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းမခံခဲ့ကြပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင်နာတာရှည် porn-induced ED ရှိလျှင်၊ သင်၏ ED / DE သည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်သင်၏ ED / DE ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဖွယ်မရှိချေ - ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ porn အသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပြီးအချို့အသုံးပြုသူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သတိရပါ၊ ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်စွဲလမ်းစေရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အော်ဂဇင်၏အကျိုးကိုသာဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် dopamine ကိုအဆက်မပြတ်မြှင့်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသည် သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့စရိုက်ဆုလာဘ် circuit ၌တည်၏။ တကယ်တော့ ED ကတီထွင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတို့သိတယ် ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့် အင်တာနက်က porn ။ မိမိအအချိန်ဇယားကိုနေ့တိုင်း porn စောင့်ကြည့်ဖို့, ဒါပေမယ့်တိုင်းဆယ်ရက်သာသာတစ်ချိန်က masturbate ဖို့ဖြစ်တယ်။
မင်္ဂလာပါယောက်ျားများ ငါ nofap မှာရောက်နေပြီးဇန်နဝါရီ ၃ ရက်ကစပြီး fap မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ nofap ပထမလအတွက်ငါလုံးဝ porn မကြည့်ခဲ့ဘူး။ ငါဖြစ်ခဲ့သည်တိုးတက်မှုများကိုလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်မှုပိုမို၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ပိုမိုကြီးမားသောဒစ် (ဟာသမရှိ) ငါဒုတိယလ၌ငါ bikini pics နှင့် softcore playboy ကိုဓာတ်ပုံများကဲ့သို့စတင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဒါကအဆင်ပြေနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအိမ်အပြင်ကိုမထွက်သွားချင်တော့ဘူးဆိုတာသတိပြုမိလာတယ်။ ပြီးတော့လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေက bikini pics တွေဆီကနေဘာဖြစ်နေတာလဲ။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနစ်မြုပ်စပြုလာပြီး ၁၀ မိနစ်ကြာဗီဒီယိုကြည့်သည့်အကြိုက်ဆုံး porn site တစ်ခုသို့သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ dopamine အလုအယက် Unreal ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှလုံးတုန်ခါနေတယ်။ ကြောင်း shit စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Netflix ကိုတစ်နေ့လုံးစောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာရှိနေတာ၊ ၅ ရက်၊ အခမဲ့ nofap 10 တစ်ခုခု။ ငါ့အဘို့အဘယ်သူမျှမကပို porn, ယင်း၏လူရှုပ်ချွတ်မဟုတ်, ၎င်း၏ porn ။ သင့်ကိုယ်သင်ဖြေလျှော့လိုက်။
“ နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” တစ်ခုကဖော်ပြသည် -
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှတစ်ဆင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏လိင်စိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း (သို့မဟုတ်အခြားအလေ့အကျင့်များ) ၏အပျော်အပါးထက်များစွာပိုနေသည်။ ထိုအခါငါဒီကောက်ချက်ချ Self- ဖော်ထုတ်နာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏လူ ဦး ရေရဲ့လူ ဦး ရေအကြားကျယ်ပြန့်သည်ကိုယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်အင်တာနက်အုပ်စုများတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည် တဦးတည်း၏အက Moderator။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံဖက်နှင့်အတူတက်ကြွစွာဆက်ဆံရေးအတွက်ဆက်လက်တောင်မှအခါ, masturbatory အလေ့အကျင့်အဘို့ခိုင်ခံ့ preference ကိုသတင်းပို့ပါ။ အတော်များများကဒါဝေးမိတ်ဖက်ရရှိနိုင်ပါနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်နေဆဲပင်နေချိန်မှာအဖော်လိင်စွန့်ခွာရန်အဖြစ်သွားပါ။
ဝေးမယ့်အနေဖြင့် "ချွတ်ပွတ်တိုက်," နာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေယေဘုယျအားဖြင့် "ကျနော်တို့ကိုခေါ်နေတဲ့အလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံedging": သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အကြိမ်ကြိမ်အော်ဂဇင်ရဲ့ချောက်ကမ်းပါးမှကိုယျ့ကိုယျကိုမြင်၏။ ကျနော်တို့နာရီစာသားလိင်စိတ်နိုးထ၏အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ဆက်ထိန်းနှင့်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရငျးနှီးဆုံးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆန္ဒပြည့်အလွန်လိုက်ဖက်နှင့်ထောက်ခံမိတ်ဖက်တွေနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါအရှိဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလှုပ်ရှားမှု၏တာယာဖြစ်စေစဉ်းစားခြင်းသို့မဟုတ်နာတာရှည်တညျးရာအပြည့်အဝ satiated ဖြစ်ပါတယ်ရှည်လျားမတိုင်မီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်သို့ကွဲပြား။ ဒီတော့ edging-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ရင်ရရှိရန် arousal ခက်ခဲသည်။ edging ၏အလားအလာစွဲလမ်းသဘောသဘာဝသိသာဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာဗြောင်သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်လာရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းနှင့်အလိုဆန္ဒဖော်ပြနာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစကားကိုနားထောငျဖို့အလွန်အမင်းသိသာသည် "ကိုပိုမိုစွဲ။ "
သင်၏စွဲလမ်းနေသော ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလိုချင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်စေလိမ့်မည်၊ အော်ဂဇင်မကြည့်ဘဲစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ယင်း၏အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်သည်ကတည်းက မဟုတ် ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုအန္တရာယ်ကင်းစေနိုင်သည်။ (ဖတ်ပါအဘယ်သို့ငါ masturbating မပါဘဲ porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ငါ၏အဦးနှောက်ပြင်ဆင်မွမ်းမံဆိုရငျကောဤစာမျက်နှာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ) သင်ကြည့်ပြီးသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသင်ခန်းစာသည်သင်အော်ဂဇင်ပြုသကဲ့သို့အလွန်ပြင်းထန်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်သင်၏ချုပ်တည်းမှု ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများကိုအားနည်းစေပြီးသင်၏စွဲလမ်းမှုအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ နှိုးဆွ။ ယောက်ျားနှစ် ဦး ထံမှအကြံဥာဏ်
ငါ့အကျင့်ပြန်ကျင့်စဉ်ကအရာများစွာသင်ယူခဲ့သည်။ သေးငယ်သည့်အစွန်းပင်လျှင်ပင်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထိုနေ့ရက်တွင်မဟုတ်ပါ၊ နောက်တစ်နေ့တွင်တိုက်တွန်းမှုသည်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ရသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအဘို့အကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိ။ ငါ့ကိုပြန်ပြီးဆွဲဆောင်နေတဲ့ငါ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီကနေငါအတွေးတွေကိုချက်ချင်းပဲငါ့ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်။
ဒီပုံဟာဘယ်လောက်ပဲအပြစ်မဲ့ပါစေကျွန်ုပ်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ vids / pics ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်တာဟာ 'relapse for high risk' အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ထိခြင်းတို့မှလုပ်ရပ်များသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု၏ပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသည့်အန္တိမအလုအယက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရဤဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို 'အသစ် / ယုတ္တိဗေဒအသစ်' လုံးဝပိတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ 'ဟောင်း / စရိုက် ဦး နှောက်' သည်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ပန်းတိုင်များ၊ အကျိုးဆက်များနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုများသည်ထိုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုလက်လျှော့အရှုံးမပေးရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သင့်ကိုယ်သင်မျက်နှာသာပေးခြင်းနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာမှဝေးရာသို့ထွက်သွားခြင်းနှင့်အကျိုးရှိရှိတစ်ခုခုဖြင့်သင်၏အချိန်ကိုယူပါ။ ခြင်္သေ့ကိုမလှည့်စားပါနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တစ်နေ့ကျရင် ---)
မည်သည့်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုမှမစွဲသူသည် 'ကြည့်ရုံသာ' နှင့်ရောနှောခြင်းအားဖြင့်ဤစွဲလမ်းမှုကိုမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ယောက်ျားတွေရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အချို့မှာ -
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆီးချိုရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုပြောတာကအနားစောင်းကအရမ်းဆိုးနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုတ်ရည်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ prostate မှာ "crystallize" ဖြစ်လို့နာကျင်မှုနဲ့အပြာရောင်ဘောလုံးတွေကြောင့်သူက urology အသင်းအဖွဲ့မှာလက်မခံဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် သူကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာပြinနာများစွာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောကြားသောကြောင့်အခြားဆရာဝန်များကယောက်ျားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ ပို၍ ဖောက်သည်များပိုလာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သတိထားပါ dude !!!!!! ဒီဆရာဝန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကသူ့လူနာ ၉၀% ဟာအသက် ၆၀ ကျော်နေပြီလို့ပြောတယ်။ အခုသူကအသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလူတွေကိုကူညီနေတယ်၊ ​​လူငယ်အများစုကသူနဲ့တိုင်ပင်တော့မယ်။ သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဟော်မုန်းများကိုအပြစ်တင်သည်။ သူသည်လိင်တံ၏အာရုံကြောများ၌အရေးကြီးသောအာဟာရများကိုထိုးသွင်းရန်ဆေးထိုးအပ်များကိုကုသပေးသည်။
အရေးကြီးချက် - Edging သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ သတိထားပါ။ ပွဲတွေနဲ့ကစားရုံတင်မကဘူး။ ထိမိပြီး dopamine သည်သင့် ဦး နှောက်သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိပြီးပြန်လည်ထူထောင်မှုကိုနှေးကွေးစေသည်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်အတော်လေးမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အခုတော့ edging ကောင်တာတစ်ခုထပ်မထည့်တော့ပါ။ ၄ ရက်ရှိပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဟာပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး၊ အကြှနျုပျ၏နံနက်စိုက်ထူပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ငါအပြာရောင် - ဘောလုံးအနည်းငယ်အဆင်မပြေခံစားရသည်သို့သော်ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဘာ မ ရမ္မက်ထသောအခါအကူအညီနဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော non-ခေါ်ဆောင်သွားလမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းသို့မဟုတ့်လိင်တံနှင့်ဘောလုံး, အသက်ရှူနှင့်အာရုံ (ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာ) ရက်နေ့တွင်ညင်သာစွာရေရွှဲနေသည်။
နောက်ခံသမိုင်း - ၂၁ နှစ်၊ အလွန်တော်သောကျောင်းသား၊ ငါတစ်နေ့လျှင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၁-၃ ကြိမ်ခန့်ဖြတ်နေသည့် ၁၆ ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ၁၆ ရက်အကုန်လောက်မှာကျွန်မရဲ့ဆီးကြိတ်ကအရမ်းမသက်မသာခံစားရတယ်။ ငါလွှတ်ပေးရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကသုတ်ရည်ပမာဏအလွန်အမင်းနည်းပါးနေပြီး၊ သုတ်ရည်ထွက်ပြီးနောက်ငါဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကြီးကြီးမားမားနာကျင်စေသည်။ ဒါကငရဲလိုနာကျင်စေတယ် ငါစုံတွဲတစ်တွဲရက်အကြာတွင် (ယနေ့) နာကျင်မှုသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်၊ ဒီပြbehindနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စက်ပြင်နောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအရမ်းထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်။ သငျသညျအစဉ်မပြတ် edging နေလျှင်, သင်လွှတ်ချွတ်ပိုကောင်းပါတယ်။
အစွန်းမလျော့နဲ့ တကယ်ပဲ မလုပ်ပါနဲ့ ဒါဟာလုပ်ဖို့လုံးဝအဆိုးဆုံးပါပဲ။ သင်သည် Edging ကို (ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း) အဖြစ်မှတ်မထားလျှင်ပင်သင်စတင်အနားယူသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပြန်လည်သက်ရောက်လာမည့်နာရီပေါင်းများစွာသာကြာလိမ့်မည်။ အသက် ၂၀ - ပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်၊ လွန်ခဲ့တဲ့လကထက်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကသူငယ်ချင်းတွေပိုများလာတယ်
“ Zeigarnik Effect သည်တချိန်ကလိုက် ခဲ့၍ မပြည့်စုံခဲ့သောရည်မှန်းချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးကျော်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့်အတွေးများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ (Baumeister & Bushman, 2008, pg ။ 122) အလိုအလျောက်စနစ်ကယခင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်မပြီးမြောက်သေးသောရည်မှန်းချက်အသစ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်သတိစိတ်ကိုအချက်ပြသည်။ လူ့သဘောသဘာဝအရကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်ကိုပြီးစီးရန်ပြီးသည်နှင့်အဆုံးမသတ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုခံစားနိုင်သည်။
browser ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ သငျသညျ fantasize စတင်လျှင်သင်၏မျက်စိကိုဖွင့်ပြီး။ တီဗီပိတ်လိုက်ပါ။ အိပ်ရာထဲကရယူပါ။ ကတက် Zip ။
ငါ Nofap ကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ အစပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲခဲ့ပေမဲ့ငါဒူးကိုတူးပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးရက်ပေါင်း 90 ကိုပြု၏။ ထိုအခါငါကန ဦး edging ခွင့်ပြုခဲ့သကဲ့သို့ငါပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါစနစ်တကျလုပ်ချင်တယ်။ FYI မင်းကအနားမယူရင်အများကြီးပိုလွယ်တယ်။
အဘယ်သူမျှမ Porn ၏ 230 + နေ့ရက်များ, အဘယ်သူမျှမ Edging ၏ 30 + နေ့ရက်များ (အထွေထွေခံစားချက်, သိကောင်းစရာများ, အကြံဉာဏ်, ထင်မြင်ချက်များ, etc)
၂၀၁၁၊ ဇွန် ၈ ရက်မှာကျွန်တော်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာကိုရပ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်မှာ (မည်သည့်ပုံစံဖြင့်) အဝတ်အချည်းစည်းမရှိဘူး။ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၃၂ ရက်အထိကျွန်ုပ်အမှားလုပ်မိသောအမှားသည် EDGING ဖြစ်သည်။ ငါ (၆) လအတွင်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်အနားယူရန်လုံးဝလုံးဝမပါဝင်ခဲ့ခြင်း (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဒုတိယသဘောသဘာဝနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားခဲ့ဖူးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပျက်) ။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက် ၃၀ လုံးလုံးကျွန်တော်ဟာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့! ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များဤတွင်ပါ။
edging နှင့်အတူ nofap ၏ 10 ရက်နှင့်ညီမျှ edging မပါဘဲ nofap ၏ 60 ရက်။
edging နှင့်အတူ 1 ရက်ပေါင်း edging နှင့် 74th ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူ 2rd ကြိုးပမ်းမှု 39 ရက်, edging နှင့်အတူ 3nd ကြိုးပမ်းမှု 15 ရက်, edging နှင့်အတူ4ရက်ပေါင်းကြိုးစား 5st ။
(ဈ 11 Yo ဖြစ်ကြောင်းကို, 1th နေ့၌ကြှနျုပျအသကျ၏အ 4st ညဥ့်ကဆြုံးခဲ့တည်းဟူသောငါ၏လိင်တံကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ဒုတိယအဘို့အရှေ့ကနေမဟုတ်) နှင့်ကိုယ့်စိတ်နှင့်ကိုယ်ထည်လူမှုရေးအရတုံ့ပြန်ပုံကိုအံ့သြမိပါတယ်, ငါ့ပြူးကြည့်သေစေလောက်ဖြစ်ပါတယ် edging မပါဘဲ nofap ၏ 25 ရက်ပေါင်း မိန်းမတို့အဘို့ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ့်ကိုကြည့်သည်လမ်းကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေကြသည်။ ခက်ခဲအချိန်အတွက်ကိုယ့်အခုအချိန်မှာတကယ့်တွေအများကြီးကူညီပေးသည်, သင်မူကား get အချို့အဆကြောင့်သင်ပြန်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရဲစွမ်းသတ္တိကိုပေးတော်မူ၏သင်တို့ပတ်လည်ပြင်ပအကြောင်းအချက်များမှစိတ်ကျရောဂါမှတဆင့်သွားနေပါတယ်ကောင်းမကောင်းယုံကြည်မှု Feeling ။
Edit: - ဈပြန်လန်းကျင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နုတ်ထွက်
တကယ်တော့ငါဘွဲ့ရကျောင်းမှာအာရုံကြောသိပ္ပံကိုလေ့လာနေတာပါ။ ဆုချီးမြှင့်မှုစနစ်အကြောင်းလေ့လာရမဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ dopamine က system ကိုတကယ်ရေကြီးစေတာပါ။ ၏မျှော်လင့်အတွက် အဆိုပါအကျိုးကျေးဇူး - ဆုလာဘ်သူ့ဟာသူပြီးနောက်။ ဒါကြောင့် neurobiological ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၅ မိနစ်လောက်အနားယူခြင်းကမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပွတ်တိုက်ခြင်းထက်အများကြီးပိုဆိုးသည်။ သငျသညျရိုးရိုးသားသားစဉ်းစားလျှင်သင်စွဲနေတဲ့အရာ, အိုမဟုတ်ပါ, PM ဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်…ငါအာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးရှုံးသွားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှစပြီးစတင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်“ ငါကောင်းစွာပြီးပြီ၊ ငါပြီးဆုံးပြီးကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်” ဟုသူကအသိအမှတ်ပြုရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်ဟုငါထင်သည်။ ထိုအခိုက်အတန့်များတွင်ပင်မတ်တပ်ရပ်။ တွန်းလှန်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အမြောက်အမြားရရှိနိုင်သည်။
ခဏတာမှာငါ့လိင်တံကိုမထိပါ ၅ ပတ်မပါ M၊ ၁ ပတ်အဘယ်သူမျှမ P. ငါ soo mellow ခံစားရတယ်။ ကောင်းသောလမ်းအတွက်။ ငါ့ OCD သွားပြီ ငါနာမငြိမ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါရှိခဲ့ထင်ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးမလှုပ်ရှားတော့ဘူး။ ငါမသိဘဲငါ့လိင်တံကိုထိဖို့ကလုပ်နေတာခဲ့သည်။ ငါအခုအရမ်းအေးတာပဲ။ ငါ့အတွက်အရာအားလုံးနှေးနေတယ်၊ ​​ငါကလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါငါကပိုပြီးအေးဆေးငြိမ်သက်တယ်။ ငါ sooooooooooooooooooo စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်၏, ငါကလုပ်ဖို့ပစ္စည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ အချင်းလူ၊ ငါသည်ငါ့ x- မိန်းကလေးခေါ်ဆိုငါ WANNA သူမကိုချစ် ... haha ​​... ငါလုပ်ပေးသူမ၏ပြောပြသည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌ရှိနေစဉ်ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်းကျွန်ုပ်မဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ ငါပြန်လုပ်မှာကိုကြောက်နေဆဲပဲ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤ rebooting အတွေ့အကြုံသည်နောက်ဆုံးတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ငါထိန်းချုပ်မှုခံခဲ့ရသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါကြည့်နေတုန်းမှာတခြားအလုပ်တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါအော်ဂဇင်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သို့သျောလညျး, ယနေ့နံနက်ငါ ဦး နှောက်မြူ (ငါ့ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒမမှန်ကြောင်းငါ့အညွှန်းကိန်း) ခံစားရသည်။ ဒါဟာငါ P ကိုမှ MO ကိုအခါငါမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာအဲဒီမှာ။ ပြီးတော့ငါလတ်ဆတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေရှိသည်နှင့်အမျှလာမည့်ရက်အနည်းငယ် (အနည်းဆုံး) ငရဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ထိုက်တန်သောအရာအတွက်။
[ထံမှ Reddit / NoFap] ဘာကြောင့်ရှေ့တန်းတင်မနေသင့်တာလဲ -“ မင်းဖော်ပြတာကို Edging လို့ခေါ်တယ်။ အကယ်၍ သင် ဆက်၍ ရှေ့ဆက်သွားပါကကျွန်ုပ်ကတိပေးသည်မှာ ifs, ands သို့မဟုတ် buts မရှိပါ။
ငါ့ကိုယုံပါ 1 + 1 =2ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ငါအရမ်းအကြောင်းပြချက်များအတွက် / ခ / သွားရပ်တန့်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်တော့ဖြတ်တောက်ပစ်ရမယ်၊ Busty မိန်းကလေးရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတောင်မှသိမြင်နေရတယ် ဤတွင်မည်သို့စတင်သည်၊ “ လူ၊ nofap မှာငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။ ရက်ပေါင်း ၆၀ ရှိပါပြီလား!?!? ငါ fap တောင်မလုပ်ချင်တော့ဘူး hmmm … wow ။ Stephanie ကဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုကြည့်နေတယ်။ ငါဘာပြောချင်လဲ။ မိန်းမပူတွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်။ နွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမကြည့်မိဖို့အတွက် nofap မှာဘာမှမရှိဘူး။ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ငါ့ကိုခွင့်ပြုပါ။ ဒါကငါက fap ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ငါအချို့ tits ကြည့်ရှုချင်တယ် ... wow, ဤမိန်းကလေးငယ်များအရမ်းပူဖြစ်ကြသည်။ ငါ့ကို gif / စစ်ကြည့်ခွင့်ပြုပါ၊ ငါကကျွန်ုပ်သည် porn streaming နှင့်တူသည်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သာ gifs ပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်နည်းနည်းလေးနှိပ်ရုံနဲ့အရေးမကြီးဘူးဆိုတာသေချာတယ်။ ငါ fap နဲ့ဘာမှမအော်ဂဇင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဤရွေ့ကားမိန်းကလေးများဒါ fuck ဆိုတဲ့ပူဖြစ်ကြသည်။ xnxx ရှိမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်သူမနှင့်တူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုစစ်ဆေးကြည့်လျှင်အရေးမကြီးပါ။ ငါမပြီးသေးဘူး၊ ငါသူ့ကိုတွေ့ချင်တယ်၊ အဲ့ vid ကဖျားနေတယ်…အိုဂျီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးသူမအရမ်းပူတယ်။ ငါထပ်ခါတလဲလဲနောက်ထပ်မပေးပါဘူး။ orgasm Wow … woooowwwww..wwwoooooowwww … .90 ရက်အတွင်း FUCKING drain … omfg ။
ငါ Streak ကိုချိုးဖောက်ပြီးပြီ ... ဘာ fuck ဆိုတဲ့အစဉ်အဆက် ... fuck ဆိုတဲ့ကတည်းကငါအဖြစ်ကောင်းစွာယခုသွားကြလိမ့်မည်။ " ထိုငါ၏သူငယ်ချင်းကသွားပုံကိုပါပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ကြိုးတန်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ရန်ခွင့်ပြုပါကသင်၏ချိန်ခွင်လျှာကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ မလုပ်နဲ့!” –Esbietoo
ဒီချောဆင်ခြေလျှောကငါတို့အားလုံးသတိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ အဓိကပြproblemနာကလူတွေကသူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့လှော်ခတ်ခြင်း၊ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် dopamine အလျင်စလိုသည်စွဲလမ်းမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်အနားယူနေစဉ်ပြန်လည်အနားယူရန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကြမ်းပြင်သည်သင်၏အောက်မှပြုတ်ကျသွားသည်နှင့်အမျှအနားယူစဉ်၊ ။ ထို့ကြောင့်၊ လူတိုင်းသည်ဘေးအန္တရာယ်ကိုပင်ရှောင်ကြဉ်ရန်ငါတိုက်တွန်းသည်။ ဤမစ်ရှင်သည် NoCum မဟုတ်ပါ။ အဲဒါကိုကိုင်တွယ်ပါ။
လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီး ၂၁ ရက်လုံးလုံးအော်ဂဇင်မပါဘဲအနားယူခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးဖြန့်ချိသည့်အခါက porn မပါဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ လာမယ့်နှစ်ပတ်အကြာမှာတော့ငါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်မင်းအတွက်သင်ခန်းစာရှိတယ်။
ငါကအတည်ပြုလိုက် အနားစောင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးသည်။ ၎င်းသည်မပြီးဆုံးသေးသောလုပ်ငန်းနှင့်တူသည်။ ငါဒီနေ့ဒီနေ့နေတယ် အရင်ကငါအေးဆေးတည်ငြိမ်ခဲ့တယ်။ တစ်နာရီလောက်အနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့စွမ်းအင်လိုခံစားရတယ်၊ ငါ့ကိုယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။ အေးခဲနေပြီးအေးမြသောအေးဆေးတည်ငြိမ်သောသမုဒ္ဒရာ၏ခံစားချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသွားသည်။ အတော်လေးအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုခံစားရဖို့နာရီအနည်းငယ်ငါ့ကိုယူ။ ငါ့သင်ခန်းစာယူ 🙁
ဒါနဲ့ ၆၃ ရက်ကြာအောင်ကျွန်တော် nofap လုပ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ PMO ကို PM နဲ့အစားထိုးလိုက်တာနဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအပတ်ကမှရလဒ်ကောင်းတွေမရခဲ့ဘူး။ ငါမဆို porn ကိုကြည့်သို့မဟုတ်လုံးဝအနားမပါဘဲထပ်မံကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးမှာအများကြီးပိုခက်ပေမယ့်အများကြီးပို။ အကျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့မာနကြီးမှုဟာကြီးမားပြီးယုံကြည်မှုနဲ့စွမ်းအင်မြှင့်တင်မှုတွေ၊ တစ်ပတ်အကြာမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ငါများစွာသောမိန်းကလေးများအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွာခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်၊ သူတို့ဟာပိုပြီးပရိယာယ်ကြပြီးနှစ်ယောက်ကတောင်ငါနဲ့တွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုပြုံးပြသည်။
သင်အနားယူရန်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်သည့်အခါသတိထားပါ။ ငါပို့စ်အချို့ကိုမြင်ကြပြီ: NoFappers edging အစည်းအဝေးများကနေဆီးကျိတ်အတွက်ဖိအား / နာကျင်မှုခံစားရတယ်။ ငါမကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သောနှစ်ခု Streak ငါ့ကိုgရာဝန်ထုတ်လွှတ်ပြီးနောက်ချွန်ထက်ရိုက်ကူးနာကျင်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
၎င်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာပုံမှန်အရွယ်အစားသို့ကျုံ့သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ၏အဆီးကျိတ်အလွန်အမင်းသဘာဝမဟုတ်ခံစားခဲ့ရအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံတဲ့ခံစားခဲ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ငါယခုနှစ်ပတ် Streak ကိုချိုးဖျက်ခဲ့ရသည်။
ငါယဉျနှင့် edging သုတ်ရည်တွေအများကြီး ejaculated ခံရဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းကိုတည်ဆောက်စေခဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီ edging နှင့်ကူးယဉျအများအပြားဝန်သဘာဝကျကျစသည်တို့ကိုစိုစွတ်သောအိပ်မက်မှတဆင့်လူစုခွဲမရနိုင်သည့်ထတည်ဆောက်စေခဲ့သည်
ငါဘယ်သူ့ကိုမှမကြောက်စေချင်ဘူး၊ သတိပြုပါ။ ဤတွင်ရလဒ်အနေဖြင့် Prostatitis သံသယကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ပicsိဇီဝဆေးများမည်သို့သုံးစွဲရမည်ကိုဤတွင်ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2pex8m/warning_edging_may_harm_your_prostate/ လင့်ခ်ကိုကြည့်ပါ။
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ FAP မရှိအလိုဆန္ဒ။
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်တယ် အပြာစာပေရုပ်ပုံမပါဘဲ (ယခု ၂၂ ရက်) ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလိုဆန္ဒမရှိပါ။ ငါမကြာခဏ horny ဖြစ်၏။ ငါကချိုသောအခါငါ porn ကြည့်ချင်တယ်။ ငါ nofapping ဖြစ်ကတည်းကငါ porn ကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ပေမယ့် porn မပါဘဲရိုက်နှက်ခံရဖို့ငါ့ကိုတွေ့ကြုံဘယ်တော့မှမ။ ငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်ငါမသိဘူး!
တစ်ခါတလေကျွန်မအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုကနေခက်ခဲလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလိုချင်ဘူး။ ငါကခက်တော့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာထူးဆန်းတယ်၊ ငါ porn ကြည့်တာတောင်မှတောင်မှငါမကြည့်ခဲ့ဘူး အလိုရှိ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဒုတိယအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်၊ ကျွန်တော် porn ကိုတတ်နိုင်သလောက်အမြဲစောင့်ကြည့်ချင်တယ်။ အများအားဖြင့်အော်ဂဇင်စတာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ တစ်ခါတလေရှက်စရာဖြစ်မယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုမကြည့်တော့တာကိုငါသိခဲ့လို့ပဲ။ ဒါကကျွန်မကိုသူနာပြုတစ် ဦး နဲ့အတူနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆက်လုပ်နေမှာပါ။ စိတ် ၀ င်စားရန်လုံလောက်ရုံမျှမက cum လုပ်ရန်မလွယ်ကူသဖြင့်တစ်ညလုံးလုံးစောင့်ကြည့်နေနိုင်သည်။
ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအရူးပဲ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလက်မလျှော့ခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်းအားအမှန်ပင်ခက်ခဲပါသည်။
ရေရှည်တွင်သင်သည်ရံဖန်ရံခါသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှပိုမိုကျေနပ်မှုရရှိလိမ့်မည် porn သို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ သင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်ထှတျအထိပျမပါဘဲ, porn မှာရှာဖွေနေထံမှထက်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း hyperstimulating ကြောင့်ဝိရောဓိ, ဒီဖြစ်ပါသည်။ (သူတို့တစ်တွေအလွန် kinky မိန်းမဆောင်ပိုင်မဟုတ်လျှင်) ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အစဉ်အဆက်ရင်ဆိုင်ဘာမျှမကဲ့သို့ဖြစ်၏။
Kinsey Institute မှသုတေသီများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းသွားစေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်သံလွှင့်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်သူတို့ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွန်ထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကျဆင်းလာပုံရသည်။ သူတို့ကပိုမိုအစွန်းရောက်, အထူးပြုသို့မဟုတ် "kinky" ပစ္စည်းကိုနှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘူး။ 2007 ခုနှစ်တွင်လေ့လာမှုကိုမေးမြန်း, ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် တဝက် စစ်တမ်းကောက်ယူဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့ porn အသုံးပြုသူ တစ်ချိန်ကသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သောပစ္စည်းများကို“ စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း၊
သိပ္ပံတင်းမာမှုနောက်ကွယ်မှ mechanics ရဲ့ elucidate မှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ 2015 မှာတော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကိုဆန်းစစ်နေတဲ့ကင်းဘရစ်အသင်းကိုသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိခဲ့ ဦးနှောက်ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမြန် habituateနှင့်ထို့ထက် ပို. အသစ်အဆန်းတပ်မက်။ အလွန်အကျွံ dopamine ဦးနှောက်ထဲမှာပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှုတုံးနိုငျသောကွောငျ့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဆွနိုင် တိုးမြှင့်လာသည် မကျေနပ်မှု။ "ရှာဖွေနေ" အမြဲတမ်းသင်အလုအယက်ပေးသည်သော်လည်း။ ဒီဝိရောဓိထင်ရသောရလဒ်အတွက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြထားသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်လိင်အပေါ်တွင်ရှိသောဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သင်တန်းခဲ့သလဲ
orgasm သူ့ဟာသူနေတဲ့အပေါ်ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ် မူးရူးဖို့အလိုဆန္ဒ အထူးသဖြင့်တကယ်ပြင်းထန်တယ်ဆိုရင်လည်းပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ မိမိကိုယ်ကိုချစ်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းသည်တူညီသောသံသရာကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘဲ (သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝအတွက်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်) ။
ပထမဦးဆုံးမှာ, သင်ကျေနပ်စရာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ခုတည်းထှတျအထိပျကိုရှာဖွေ, ဒါမှမဟုတ်မတှေ့နိုငျတယျ, ကိုသတိထားပါ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ ထှတျအထိပျဖို့လုံလောက်တဲ့နှိုးဆွ။ အကြောင်းကတော့သင့် ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုလာဘ်များခံစားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတိုက်တွန်းလိုစိတ်ကအတော်လေးသက်သာသွားခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းရန်မလိုအပ် အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရှည်ပါ။
သတငျးကောငျးကိုလအနည်းငယ်မပါဘဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ မည်သည့် porn ဆိုမျိုးကိုပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာ၏လိင်စေမည်။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲ porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း”
အော်ဂဇင်မပါဘဲ porn အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအသုံးပြုသူမှတ်ချက်